Dowladda Somalia iyo Amisom oo cambaareeyey qaraxii garoonka Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Dowladda Somalia iyo Amisom oo cambaareeyey qaraxii garoonka Muqdisho
A warsame 13 February 2014 4 April 2019
Muqdisho – Mareeg.com: Dawladda Federaalka Soomaaliya waxay si adag u cambaareynaysaa weerarkii isqarxinta ahaa ee maanta ka dhacay afaafka hore ee agroonka diyaaradaha Muqdisho.
“Waxaan cadaynaynaa in weerarkaasi uu ahaa mid ay ka dambeeyeen kooxaha nabad-diidka waxaana ku raadjooga laamaha amniga ee dowlada Soomaaliya” ayuu yiri wasiirka warfaafinta Soomaaliya Mustaf Sheekh Cali Dhuxulow
“Kooxaha Argagaxisadu waxa ay mar weliba isku dayayaaan sidii ay qalqal u gelin lahaayeen dad shacabka ah islamarkaana uu amnigu faraha uga bixi lahaa si ay usii wadaan khalalaasaha, hase yeeshee dowlada Soomaaliyeed ma ogolaan doonto falalakaasi ayuu hadalkiisa ku daray wasiirka warfaafinta Musatafa Sheekh Cali Dhuxulow oo hadal qoraal ah xafiiskiisa maanta kasoo saaray” ayuu sidoo kale Mustaf Dhuxulow ku yiri war-saxaafadeed uu soo saaray.
Dhanka kale, wakiilka gaarka ah ee Midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya, Danjire Mahamat Saleh Annadif ayaa cambaareeyay weerarkii duhurkii maanta ka dhacay agagaarka garoonka diyaaradaha ee Muqdisho.
Qaraxa oo loo adeegsaday gaari laga buuxiyay walxaha qarxa ayaa sababay dhimashada lix qof oo rayid ah iyo dhaawaca 15 kale. Qof dumar ah ayaa ka mid ah dadka ku naf waayay weerarka.
Danjire Annadif ayaa tacsi u diray ehelada iyo saaxiibbada dadkii ku dhintay weerarka, wuxuuna ugu baaqay dadweynaha Soomaaliyeed inay gacmaha is qabsadaan oo ay la shaqeeyaan ciidanka ammaanka ee ku howlan la dagaallanka Al-Shabaab.
Danjiraha ayaa sheegay in ciidanka AMISOM iyo kuwa dowladda ay qaadi doonaan tallaabooyin lagu xaqiijinayo badbaadada dadka rayid ah ee Soomaaliyeed.
Ciidamada ammaanka AMISOM ayaa isla markiiba gaaray goobta si ay u caawiyaan daad-guraynta dadka dhaawacmay iyo ilaalinta goobta ay wax ka dhaceen.
Al-Shabaab ayaa sheegatay mas’uuliyadda weerarka maanta ka dhacay afaafka hore ee garoonka Muqdisho, waxeyna sheegteen iney ku dileen sedax saraakiil ajnabid ah, islamarkaana ku dhaawaceen 10 ka tirsan ciidamada Soomaaliya.
Qarax is-miidaam oo agagaarka Garoonka Aadan Cadde lagula beegsaday kolonyo UNHCR
Kooxda Qaramada Midoobay ee kormeerka hubka Soomaaliya oo tiri “Hub ayaa loo weeciyey Alshabaab”